Iphupha malunga neBhanana Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ixesha ledinga elingagqibekanga el mundo uyazi ngeebhanana kwaye uninzi lwabantu luyazithanda iziqhamo. Ihlala ityiwa yodwa okanye iphakwa njengenxalenye yokutya. Nangona kunjalo, abantu abangadibaniyo nesi siqhamo bahlala bekhetha ukungasonwabisi, kuba oko kunokubangela ukurhawuzelela emlonyeni, phakathi kwezinye izinto.
Into abangayaziyo abaninzi kukuba ibhanana yeyamajikijolo ngokwembono yezityalo. Nangona izityalo zikhangeleka ngathi yimithi, eneneni zizezona zingapheliyo; Nangona kunjalo, bafikelela kubude obuphakamileyo obungangeemitha ezi-6. Hi ndlela leyi, ibhanana ligwenxa kuba iziqhamo ezininzi zikhula kwiqela leziqhamo ezincike emhlabeni. Nangona kunjalo, ibhanana nganye ihlala ikhula isiya ilangaOko kukuthi, phezulu kwakhona.
Iziqhamo zebhanana ezaziwa kuthi zingeniswa ikakhulu kuMbindi nase Mzantsi Melika. Onke amaJamani atya umndilili we-10,5 kilograms yeebhanana ngonyaka. Ngenxa yomxholo wayo ophakamileyo we-fructose, iziqhamo ezikweleenjiko zinencasa emnandi kakhulu. Oku kunye nokungaguquguquki kwayo ngaphandle kwembewu ekhathazayo kunye nexolo elisuswe ngaphandle kwezixhobo kuyenza ibe sisiqhamo sesibini esithandwa kakhulu, kanye emva kweapile.
I-Banana nayo isempilweni: iqulethe iivithamini kunye neeminerals ezininzi, inefuthe lokunyanga isisu, kwaye inefuthe elihle kwingqondo.
Ibhanana ephupheni inokuthi ikhatshwe ngamava enkanuko. Ukungcamla, ukuvumba, ukuziva, izivamvo zivuselelwa kamnandi. Ngokwentsingiselo yesimboli yamaphupha "ibhanana" ekutolikeni amaphupha, yintoni eyenziwa leli phupha ngesiqhamo kubalulekile. Ubume besiqhamo nabo budlala indima.
Kukho iimeko zokuphupha ezivela rhoqo rhoqo ngokunxulumene nebhanana. Funda ngakumbi malunga noku kwangaphambili:
1 Uphawu lwephupha «Ibhanana» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ukutya ibhanana ephupheni.
1.2 Ibhanana ebolileyo ivela ngelixa ulele
1.3 Ukutolikwa kwebhanana notywala
1.4 I-banana smoothie ephupheni.
2 Uphawu lwephupha «ibhanana» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ibhanana» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ibhanana» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Ibhanana» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ukutya ibhanana ephupheni.
Nabani na otya ibhanana emaphupheni abo okanye abone umntu esitya esi siqhamo ngokufihlakeleyo ugcina iminqweno engamanyala. Iingcinga zakhe zijikeleza rhoqo kwilizwe lokuvuka malunga neminqweno yesini kunye neminqweno yesini, ebonakaliswa ngohlobo lwesiqhamo sebanana esimnandi emaphupheni. Lulwaneliseko lweemfuno.
Ukuluma ibhanana kubonisa njengemeko yephupha ukuba uyolo lwenyama lunokuqondwa kakuhle. Ukuphupha kuyakwazi ukuyeka kwaye wonwabele umzuzu.
Ibhanana ebolileyo ivela ngelixa ulele
Ngaba ukhe wayibona ibhanana ebolileyo ephupheni lakho elimnyama okanye eligutyungelwe kukubola nokubumba? Emva koko kunokubakho iingxaki kwindawo yokunxibelelana, umzekelo, kwintsebenziswano, ukuba ikho enye. Kodwa kunye nomhlobo osenyongweni okanye intombi inokugrogrisa ukuhamba kweli phupha. Ngokunjalo, ibhanana ebolileyo inokubonisa inqanaba lobomi okanye ukusilela kwesicwangciso.
Ukutolikwa kwebhanana notywala
Umfanekiso wephupha ongaqhelekanga, kodwa owenzeka rhoqo, ibhanana ngokunxulumene notywala. Mhlawumbi ubonile i-cocktail eyenziwe ngezi zithako? Utywala bufanekisela ukuphathwa ngokulula kweengxaki, ibhanana imele isini.
Ngokudibeneyo nomnye nomnye, ingxaki yesondo iyaqatshelwa, kodwa ayisonjululwa - umphuphi uzama ukungahoyi oku. Ukuphathwa ngononophelo koku kungacetyiswa.
I-banana smoothie ephupheni.
Kwi-smoothie, iintlobo ezahlukeneyo zeziqhamo okanye imifuno ihlambulukile kwaye isela. Ukuba uphupha ukuba i-smoothie iqulethe ikakhulu okanye inxalenye yebhanana, ke ezinye izithako ezisetyenzisiweyo nazo zithatha isigqibo sokutolika ngokubanzi kwephupha: ibhanana ibonisa inkalo yesondo yomcimbi oxutywe neminye imiba. Umzekelo ungangumntu osebenza naye onxulumene naye ngokomsebenzi, kodwa naye okufumanisa unomdla ngokwembono yesini.
Uphawu lwephupha «ibhanana» - ukutolikwa ngokubanzi
Ekuchazeni amaphupha, ibhanana ayisiyophawu nje lokwabelana ngesondo kunye neenkanuko. Njengokutya okukhethiweyo kweenkawu neenkawu, ikwafumaneka nakwithambeka ekufanele ukuba lube nalo olu hlobo lwesilwanyana. inkanuko embi. Isimboli yephupha "ibhanana" ithembisa iintlobo ukuba uyithenga ephupheni. Ayinamsebenzi nokuba ukuthengwa kwenziwa kwindawo yokuthengisa okanye kwivenkile enkulu.
Ukuba iphupha libona uphawu lwephupha «banana», uya kusondela kumntu odibanise naye kakhulu ngokomoya. Nabani na okhetha iibhanana ezivuthiweyo uvuna iziqhamo zomsebenzi wakhe ephupheni. Iibhanana ezibolileyo zikhomba kwisimboli yephupha ukusilela yezicwangciso.
Kwibali lothando okanye kubomi bobuchwephesha, iminqweno emininzi iya kuzaliseka xa ubona iibhanana phambi kwakho njengokutya, umzekelo, njengenxalenye yedizethi.
Ngokusisiseko, uphawu lwephupha «ibhanana» luphawu ukukhula ngokwesondo okanye ukuchuma, kwaye ichaze ukutolika kwephupha isidingo sothando lwesondo. Oku kuyinyani ngakumbi kubafazi abaphupha ibhanana. Ngokukodwa, ekusetyenzisweni kwesiqhamo, umnqweno onamandla wenkanuko ubonakalisiwe ekutolikeni amaphupha.
Amanye amaphupha afumana iziqhamo ngexesha lenkqubo yokupheka, umzekelo, xa kugcinwa kugcinwa iibhanana okanye ibhanana ixotyulwe njengenxalenye yesitya kwaye isikwe ngemela yasekhitshini. I-banana jam okanye ijam, esulungekileyo okanye exutywe nezinye iziqhamo, ihlala ibonisa ukuba ulonwabo luseza. Nabani na osika ibhanana yamaphupha abo ngamava okwahlukana, nokuba kungaluphi na uhlobo.
Uphawu lwephupha «ibhanana» - ukutolikwa kwengqondo
Njengezinye iziqhamo ezininzi, uphawu lwephupha "ibhanana" luphawu lokungazi. iminqweno yesini. Ngenxa yobume bayo, ibhanana ifanekisela ilungu lobudoda, ikwabizwa ngokuba yi "colloquially" njenge "msila." Ke ngoko kubalulekile, ngakumbi kumaphupha amabhinqa. Phallussymbol.
Ukuba umfazi utya ibhanana ephupheni, olu phawu luphupha lunokubonisa iimfuno zesondo ezicinezelweyo. Abo baphuphayo kufuneka babuze ukuba yeyiphi iminqweno yesini elele ezingalweni zabo kwaye kufuneka bakuthathele ingqalelo ukuzaliseka kweminqweno yabo.
Amadoda aphupha ukutya ibhanana anokungazi uloyiko ngaphambi kwesini ngokubanzi. Uloyiko lokuphulukana namandla okanye ukuthena kungabonakaliswa kwisimboli sephupha "ibhanana." Ukuba umsitho wephupha unxulumene noloyiko okanye ukukruquka, oku kuyaqondakala ekutolikeni kwephupha njengesicelo kulowo uphuphayo ukuba abuze indlela aziphethe ngayo ngokwesondo okanye neqabane lakhe.
Iminqweno eyimfihlo y IimpawuUkuba awukhathaleli ngenxa yomnye, kodwa ingekuko ukonwaba kwakho, kufanele ukuba kujongwane nawo ngabom.
Uphawu lwephupha «ibhanana» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, uphawu lwephupha "ibhanana" luphawu lokuchazwa kwamaphupha. Ukuchuma. Ekuxobeni izaleko zetraki yebhanana, ukukhangela ulwazi olungunaphakade kubonisiwe, ukungena nzulu ngakumbi kwinyani epheleleyo.